Ny fanorenana ny fifandraisana matotra ny Fiarahana Toerana Aostralia
Fanorenana ny fifandraisana lehibe ny tanjona ireo frantsay tokan-tena mitady ny tantaram-pitiavana izay tsara sy maharitra. Mety ho sarotra sy sarotra, na izany aza, mba hahitana ny marina amin’ny olona: ny iray izay manaiky ny rehetra ny hadisoana izay hamitaka anao isan’andro ho an’ny sisa amin’ny fiainanao izay te-hampiasa vola fotoana betsaka araka izay hataonao mba hihazonana ny miaraka sy tia fa ianao no nankafy ny maha-vaovao ny mpivady. Famoronana fifandraisana matotra no atao tsikelikely, miaraka amin’ny tsipika ny antony manosika sy ny tsara fatra ny fihetseham-po.
Mba hanorina fifandraisana matotra, ny sasany dingana ilaina no ilaina. Ny fe-potoana maha-tokan-tena mialoha ny fifandraisana vaovao dia manome anao fahafahana mba hianatra bebe kokoa momba ny tenanao. Moa ve ianao mahafantatra izay tokony ho faly? Raha tsy maintsy hisaraka, anontanio ny tenanao hoe inona no te-avy amin’ny hoavy lehibe fifandraisana. Eritrereto hoe inona no fihetseham-po ao amin’ny fifandraisana teo aloha intsony ianao tsy te-hiaina ao amin’ny ho avy, toy ny fialonana na ny tsy fahampian’ny fahatokian-tena. Fanorenana ny fifandraisana lehibe dia mitaky anao mba manontania tena hoe ireo fanontaniana tsara. Ny fe-potoana nandritra izay anareo hahafantatra ny ho avy mpiara-miasa dia tsara ihany koa ny fotoana ho an’ny tena manokana fanombanana. Izao no fotoana mba hanazava ny tsy fanajàna ny fifandraisana teo aloha sy manapa-kevitra amin’ny fepetra fa ianao dia mitsara mba ho manan-danja indrindra, mba ho azo antoka fa vaovao ity olon-tiany mahazo eny ny tena tsara indrindra hanombohana. Te-hiaina ny fitiavana tanteraka ny tantara, dia mitaky ny momba ny mason-tsivana ho an’ny fifidianana ny mpiara-miasa ara-dalàna izany. Izany hoe, ny tonga lafatra na lehilahy na vehivavy dia tsy misy ary satria fantany izany, dia tokony ho azo kokoa, mamela heloka kokoa momba ny hevitra sasany sy malefaka kokoa amin’ny hafa. Izao no fotoana tsara mba manao kely list, izay nametraka tsy nidina ny fepetra manan-danja ho an’ny ho avy mpiara-miasa, fa eo ihany koa ny tsy an-katerena ireo. Ohatra, dia mety ho mitady ny lehilahy iray izay manana ny zanaka sy izay monina ao amin’ny faritra Atsimon’i Frantsa. Ny zava-misy fa izy no manan-janaka dia mety ho teboka manan-danja ho anao, fa izay velona izy dia zavatra izay misokatra amin’ny fanovana sy ny maro malefaka kokoa, izay midika fa afaka manasokajy azy io ho toy ny tsy an-katerena. Tsotra ireo tena-ny fanombanana ny asa ho tena ilaina amin’ny fanampiana mba hampiorina mafy fototra ho amin’ny hoavy lehibe fifandraisana. Rehefa manjavozavo ny faniriana ny hanorina fifandraisana maharitra dia tsara, fa izany no zavatra tsara ho fantatsika mazava tsara ny fomba sy ny, ny tena tsara, izay miaraka. Ireo fanapahan-kevitra ireo no ho mahasoa nandritra ny fananganana ny dokambarotra ao amin’ny tranonkala ny safidy. Taorian’ny voalohany hifandray sy vitsy ny fifanakalozana, dia manomboka manontany tena raha ny fifandraisana manana fahafahana ho tonga matotra sy maharitra.
Anontanio ny tenanao raha vonona ianao hanao ny ezaka mba hanorina fifandraisana izany
Isika dia tsy miresaka momba ny fanomezana ao ny zava-drehetra ny vaovao mpiara-miasa te-fa mieritreritra momba ny manomboka ny traikefa nahafinaritra iray malefaka toe-tsaina. Tsarovy fa ny fifandraisana no nanao ny marimaritra iraisana, ary mitaky fotoana mba hifanaraka tsara miaraka. Ary koa ny hoe afaka manao marimaritra iraisana, dia zava-dehibe ihany koa ny hanome ny fifandraisana, ny fotoana. Misy maro izay tsy, indraindray be loatra haingana, ny hijanona hiaraka toy ny mpivady rehefa angamba izy ireo dia tokony hanolo-tena bebe kokoa ny vintana mba hanaporofoana fa ny fifandraisana mety ho nanao ny asa. Naka ny bearings, ny fanorenana ny toetrandro, ny fitokisana, ny fanorenana ny fototry ny firaisana tsikombakomba ho toy ny roa, ho fianarana ho fantatra rehetra momba ny tsirairay sy mahita ny fifandraisana akaiky ireo rehetra ireo dia dingana izay mitaky faharetana sy ny fampiasam-bola. Mitaky mihoatra lavitra noho ny iray na roa andro mba hahatakatra raha toa ka dia samy nanao ny miara-miaina. Ny hery ny fitiavana ihany lasa toa mandritra ny fotoana maharitra, satria ‘rehefa ny fitiavana maharitra, izany dia toy ny fototry ny fiainana’ (David Mamba)
← Ny fomba-ny firaisana ara-nofo
Vohikala maimaim-poana Manana ny Lahatsary amin'ny Chat an-Tserasera Tsy misy Fisoratana anarana →